ဘာမှ မရှိတော့တဲ့ အဖြူရောင် မျက်နှာပြင်ကြီးက
ဘာမှ မရှိတော့တဲ့ အဖြူရောင် မျက်နှာပြင်ကြီးက
ဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရခြင်း သက်သေ အဖြစ်
အဖြူရောင်ကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းရတာ မရှိဘူး…။
ဒီနေ့ မှာ အဲဒိ အဖြူရောင်မျက်နှာ ပြင် ကြီး ကို မမျှော်လင့် ပဲ တွေ့ လိုက်ရတော့ ခံပြင်းမိတယ်…
ဒီနေ့ မှာ အဲဒိ အဖြူရောင်မျက်နှာ ပြင်ကြီး ကလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းတွေ ကို ပိတ်ဆို့ ထားခြင်းရဲ့သက်သေပဲဖြစ်တယ်…
အဲဒိ အဖြူရောင်မျက်နှာ ပြင်ကြီး က ဆင်ဖြူ ရဲ့မျက်နှာ ကို ဆင်မည်း ကမကြည့်ဝံ့တဲ့ ရလာဒ်ပဲဖြစ်တယ်..
အဲဒိ အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ကြီး ကို တိမ်ရောင်စုံ တောက်ပလာအောင် အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကြရမယ်..
အိပ်မက်တွေမဟုတ်စေရဘူး..ဖြစ်ကိုဖြစ်ရအောင် ၀ိုင်းဝန်း ကြမယ်..ဒါဟာမျိုးဆက်တိုင်း အတွက်..ဖြစ်တယ်….
Sep 10, 2007, 9:56:00 PM
အဖြူရောင် အဖြူရောင် ၀မ်းနည်းတယ် ကိုစေးထူးရယ် ..
အဖြူရောင် screen ကိုမုန်းတယ်။ မမြင်ချင်ဘူး။ အရင်အတိုင်း အနက်ရောင်ပဲ ပြန်မြင်ချင်တယ်။
I have been busy with Uni activities these days.
When I got back online, eek..
what is happening? I con't understand at all.
When I read this poem, I feel the same as you do.
what is life? how is life?
Sep 11, 2007, 2:58:00 AM
အဖြူရောင် ကို မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏ ဆွံ့ အမိတယ်။
မဟုတ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပေမယ့် အစစ်အမှန်ဆိုတာ ငြင်းမရဘူး၊ မိုးကုတ်မီဒီယာက ကိုသားဖြူကိုလည်း ဖမ်းသွားတယ်တဲ့။
အမှန်တရား ကို မှားနေတဲ့သူတွေက ကြောက်ကြတာကိုး။
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ တို့ပြည် တို့မြေ....တဲ့
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်စွာနဲ့ ကျူးရင့်ခွင့် ရပါရစေ.....
Sep 11, 2007, 3:54:00 AM
နေ့တိုင်းဖတ်ဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာ ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ့်ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လားလို့ မနက်ကနေ ညနေအထိ ခဏခဏဖွင့်နေမိတယ်။
Sep 11, 2007, 5:43:00 AM
And we must do something.....
Sep 11, 2007, 7:33:00 AM
I am very concerned about Maydawii?
Does Junta block the blog only or do they do something to her?
If you know share the hints.
PS: I am waiting for the Philter' turn.He will get the result what he's done.
Sep 11, 2007, 9:12:00 AM
What the hell are u talking about me, khin myanmar,,slutty bitch... when everybody feels sorrow for her, u are amusing for her big trouble. what kind of person u are??? i don't care ur shitty gov at all... im going on my way... just make sure ur own safty,,, im about to come to u to do something that u really want from me... piss off from this kind of blog... avoid to drop ur worthless comments
Sep 11, 2007, 9:40:00 AM
နည်းပညာဆိုတာ အပိတ်ရှိရင် အဖွင့် ရှိပါတယ်။ ဘာမှ အားမငယ်ကြပါနဲ့။
Sep 11, 2007, 12:22:00 PM
ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲပြောပြကြပါအုံး၊ ကိုစေးထူးရေ အဖြူရောင်ကိုပြန်အသက်သွင်းမဲ့လူကိုရှာကြပါအုံး၊
Sep 11, 2007, 12:25:00 PM
Sep 11, 2007, 12:33:00 PM
အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ ကိုယ့်ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်သွားတာကို အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ပဲ ကျန်တယ်.. ကမ္ဘာကြီးကို မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ရမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ဆိုတာ အခုပြသလိုက်တာပါပဲ။
Sep 11, 2007, 1:14:00 PM
မမေကိုလူချင်းရင်းနှီးတဲသူ ရှိရင်ပြောကြပြကြပါ၊ မေးမြန်း
ကြပါအုန်း၊တခုခုဖြစ်နေရင်စိုးရိမ်စရာ ဒီဘလော့ကဘယ်အချိန်မဆိုသူပြန်ဖန်တီးနိုင်တယ်၊ လူကသာအရေးကြီးတာပါဗျာ၊၊လုပ်ကြအုံးလေ ဘယ်လိုဖြစ်
Sep 11, 2007, 9:04:00 PM